दशैंमा आउनेभईन् आर्यनकी ‘सुश्री’ ! « Mazzako Online
दशैंमा आउनेभईन् आर्यनकी ‘सुश्री’ !
मज्जाको अनलाईन, भदौ १७ गते, विहिबार, २०७२, काठमाण्डौं ।
आर्यनकी ‘सुश्री’ ??? नझुक्किनुहोला, ‘सुश्री’ चलचित्रको नाम हो जसमा आर्यन सिग्देल शिर्ष भुमिकामा छन् । चलचित्रमा आर्यनको साथमा देखिनेछिन् आशिका तामाङ् । आशिकाको डेब्यु चलचित्र ‘सुश्री’ले प्रर्दशन मिति तोकेको छ । जानकारी गराईए अनुसार चलचित्र दशैंमा प्रर्दशनमा आउनेछ । दशैं तिहारको बेला चलत्रिले राम्रो ब्यापार गर्ने भएकाले पनि अधिकांश निर्माताले यो बेलामा रिलिजको मौका छोप्ने गर्दछन् ।
चलचित्र ‘सुश्री’ले दशैमा तीन चलचित्रहरु ‘अधकट्टी’, ‘ठमेल डटकम’, ‘परदेशी’ सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । चलचित्र लेखक शिबम् अधिकारीले पहिलोपटक निर्देशन गरेको यस चलचित्रका निर्माता आत्मराम थापा पनि फिल्म इन्डष्ट्रीमा नयाँ नै हुन् ।
निर्देशक,हिरोइन र निर्माता नयाँ भए पनि चलचित्रले पुराना फिल्म मेकर र कलाकार संग स्पर्धा गर्ने हिम्मत गरेको छ । चलचित्रको रिलिज कार्तिक ३ गते गरिने बताईएको छ । ‘सुश्री’मा आर्यन र आशिका सहित अर्की नायिका सुरबिना कार्की, राजाराम पौडेल,बिकास चापागाईं र मिश्री थापा लगायतलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सकिन्छ ।
चलचित्रलाई रामेश्वर कार्कीले खिचेका छन् भने शंकर बिसीको कोरियोग्राफी रहेको छ । सानुकुमारको दन्द निर्देशन रहेको यस सिनेमामा बसन्त सापकोटा र सुबास भुषालको संगीत रहेको छ ।